Ọkụ iTunes Library Music ka CD
Gaa na TunesGo icon ugbu na PC gị na na abụọ click na ya na-emeghe software na ga-egosipụta a n'ụlọ ihuenyo dị ka onye e nyere dị n'okpuru screenshot.
Na n'aka ekpe menu nke TunesGo peeji, họrọ "Music" nhọrọ ugbu n'okpuru iTunes Library. (Nseta ihuenyo-egosi nnọọ red igbe)
Nzọụkwụ 3. Họrọ "Ọkụ CD" ọrụ
Ugbu a n'elu menu mmanya na nri kasị n'akụkụ họrọ nhọrọ nke "Ọkụ CD" (nseta ihuenyo egosi red n'ọkpụite gburugburu)
Nzọụkwụ 4. fanye a ide CD
The software ga ugbu a na-ajụ gị ka itinye a ide CD n'elu nke gị mkpa fanye CD na CD mbanye gị PC.
Nzọụkwụ 5. ikpuru music si iTunes Library ma ọ bụ PC / Mac isure ndepụta
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ songs si gị ọbá akwụkwọ na ị chọrọ apa ọkụ. N'ihi na nke a ịdọrọ tracks si gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na apa ọkụ ndepụta gị PC / Mac. (Nseta ihuenyo egosi 7 họrọ songs na Ọkụ nhọrọ ke akara red gburugburu)
Nzọụkwụ 6. click "Ọkụ" button na ala nke apa ọkụ ndepụta
Ozugbo i kere a apa ọkụ ndepụta, ị ugbu a mkpa pịa na nhọrọ nke "Ọkụ" ugbu a na nri ala nke na peeji nke na ọkụ usoro ga-amalite. (Nseta ihuenyo na-egosi na ọkụ usoro ebe 6% na dechara)
Nzọụkwụ 7. Ọma music ọkụ ka CD
Ozugbo music na-ọkụ na CD ọma ozi nke congratulation ga-apụta.
Ọzọ: Idozi iTunes Music ekpuchi